Nudism any Azia sy ny morontsiraka, mitady fahalalahana? | Vaovao momba ny dia
Mikatsaka fahalalahana? Nudism any Azia
Maria Jose Roldan | | Filipina, India, Tailandia, Fitsangatsanganana any Azia
Betsaka ny olona izay miha miloka amin'ny fitoraham-bolon-koditra, samy irery ao an-trano sy rehefa manao dia. Aleon'izy ireo mankafy ny fialan-tsasatra amin'ny fomba tsapany fa tena afaka, fa tsy misy zavatra mamatotra azy ireo na tsy maintsy mamoritra azy ireo aho. Ny olona dia efa manana fenitra ara-tsosialy be loatra napetraka isan'andro ka amin'ny fialan-tsasatra dia mila mamono ny faniriantsika handeha mitanjaka isika raha izany no tiantsika hatao, marina?
Saingy tsy afaka mandeha na aiza na aiza ianao ary manaisotra ny fitanjahanao mba hampiharana ny fitoviana amin'ny olon-kafa. Misy olona hafa tsy eken'izy ireo izany fomba fiaina izany Ary tokony hajaina izy ireo, toy ny tokony hanajan'izy ireo anao raha manapa-kevitra ny hanao nudism ianao amin'ny toerana voatondro ho azy.
Ahoana anefa raha te-ho any Azia ianao? Any no hahafahanao mitady fahalalahana hahafahanao mankafy ny fitiavam-bolon-tena ary hankafy ireo tany ireo miaraka amin'ny fiarahamonin'izy ireo sy izay rehetra atolotra anao? Aza adino ny antsipiriany satria androany aho te hiresaka aminao momba ny fahalalahana izay mety ho hitanao raha te-ho any amin'ny kaontinanta lehibe Azia ianao.
1 Misy torapasika miboridana ve any Azia?
2 Misy toerana sasany hampiharana ny fahamendrehana amin'ny ampahany
2.3 Morontsiraka sasany amin'ny morontsirak'i India
Misy torapasika miboridana ve any Azia?
Miala tsiny aho fa ianao no tokony hilaza aminao fa raha ny tena izy, tsy misy moron-dranomasina eran'i Azia ahafahanao mahita tora-pasika miboridana tanteraka sy ofisialy.. Ny fiarahamonina aziatika dia manana kolontsaina mpandala ny nentin-drazana Ary araka ny soatoavin'izy ireo, ny fitoviana dia tsy fanao tsy ankasitrahana na dinihina mihitsy aza.
Saingy izany no teôria satria ny zava-misy dia na dia eo amin'ny sehatra ankapobeny aza io no eritreritra lehibe, ny zava-misy dia ny olona sasany mipetraka any Azia mahita amin'ny nudism fomba fanao manafaka izay manampy azy ireo hifandray amin'ny toetrany anaty ary koa amin'ny natiora.
Misy toerana sasany hampiharana ny fahamendrehana amin'ny ampahany
Noho izany antony izany, any amin'ny kaontinanta Aziatika lehibe ianao dia afaka mahita toerana sasantsasany izay ahafahan'ny mpizahatany avy amin'ny faritra hafa manerantany (ary koa ireo Aziatika manana toe-tsaina tsy dia mitandrina loatra) afaka manao nudism ampahany nefa tsy misy fifanolanana lehibe ary tsy mila manana olana ara-dalàna na amin'ireo manampahefana eo an-toerana ...
Misy firenena 5 na 6 farafaharatsiny izay ahafahana manao ny fitanjahana tsy misy tahotra ny vokadratsin'ny lalàna. Ohatra, raha te-ho any Thailand ianao dia misy zavamaniry iray izay ekena ampahany amin'ny fitanjahana ary tsy hisy hijery anao hafahafa ianao raha te hankafy izany fahalalahana izany na dia ampahany aza.
Ny morontsiraka lazaiko dia any amin'ny nosy Koh Pha Ngan. Saingy tsy maintsy mitandrina ianao ary miantoka ny faritra ahafahanao manao nudism ampahany, satria tsy ara-dalàna ny fitiavam-bolo tanteraka any Thailand ary raha mampihatra izany ianao dia afaka manakana anao. Raha mankany Thailand ianao dia tsy maintsy manaja ny lalàna toy ny any amin'ny firenena hafa mba hialana amin'ny olana tsy ilaina.
Betsaka ny olona milaza fa any Filipina dia afaka mampihatra ny fitanjahana tsy misy valiny lehibe ianao. Na dia tsy afaka mampihatra ny fitiavam-bolo na aiza na aiza itiavanao ianao satria tsy ara-dalàna ary mety hosamborina ianao, dia toa misy toerana any Filipina ahafahanao manao nudism nefa tsy hatahotra ianao raha manitsakitsaka ny lalàna na tsia. Any amin'ny faritanin'i Palawan no misy ny nosy antsoina hoe Boayan. Amin'ity nosy ity dia afaka mandeha any amin'ny trano iray ianao ahafahanao manofa toerana miaraka amin'ny vadinao ary afaka mankafy amoron-dranomasina manokana hahafahana manao fitanjahana.
Miaraka amin'izany manofa ianao dia hanana safidy hanao izay tianao eny amoron-dranomasina toy ny mandeha miboridana tanteraka nefa tsy hanelingelina olona. Mazava ho azy, tsy maintsy manana fihetsika feno fanajana ianao amin'ireo olona hafa mankafy ny fanofana azy eto amoron-dranomasina. Herin'ny vola io, na dia tsy avela aza ny fitanjahana, raha mandoa ianao ... dia azonao atao amin'ny toerana voafetra izany. Aza mieritreritra ny hanao izany any ivelan'ny toerana azo ekena, satria mety hanana olana ianao amin'izay.
Morontsiraka sasany amin'ny morontsirak'i India
Fa raha ny zavatra nolazaiko taminao hatrizay dia toa tsy dia hitanao loatra ary te hahalala bebe kokoa ianao dia tokony ho fantatrao fa any amin'ny morontsirak'i India dia azonao atao ihany koa ny mampiasa nudisme ampahany na nudisme malina. Izy ireo dia faritra tsy dia mpandala ny nentin-drazana loatra ary mahazaka olona mampihatra izany.
Ireto morontsiraka lazaiko anao ireto dia manana tantara sy lasa ary izany no antony ahafahan'izy ireo mandefitra io fomba fanao io, angamba raha tsy toy izany ny tantara dia tsy milefitra amin'ireo fomba fanao ireo izy. Fa ny tena izy dia misy ny sasany amin'ireo morontsiraka ireo miaraka amin'ny lasa mpandala ny nentin-drazana somary mpandala ny nentin-drazana Nanana fitaomana hippie tena lehibe izy ireo ka nanaja ny tantara ny Indiana. Noho io antony io dia hajaina ny sasany amin'ireo fomba amam-panao taloha raha toa ka tsy zavatra maniratsira, vetaveta na mety hanimba ny fanajan'olon-kafa izany.
Raha te-ho any India amin'ny dia ianao na amin'ny fialan-tsasatra ary liana mankafy ireo karazana morontsiraka ireo dia aza misalasala mandeha any torapasika toa ny Ozra Beach na Vagator Beach, samy ao Goa avokoa. Amin'ireo faritra rehetra ireo dia izy ireo angamba no morontsiraka izay misokatra indrindra amin'ny fitoraham-bolo eto amin'ity faritra ity.
Raha te-ho any Israel ianao dia tokony ho fantatrao ihany koa fa tsy avela ny fitanjahana fa raha mandeha any amin'ny torapasika any Tel Baruch (izay eo avaratry Tel Aviv) ianao, Eingedi na ny Ranomasina Maty dia afaka mahita faritra misy toerana itetezana anao. afaka mametraka akanjo safidy sy ampahany.
Zava-dehibe tokoa ny manamarika fa rehefa avelany hanao nudism ampahany ianao dia midika izany fa tsy azonao atao ny mampiseho ny vatanao iray manontolo miboridana, izany hoe tsy fitenenan-dravina. Raha ny mahazatra dia hataon'izy ireo manafy lamba filamatra sy ny vodin-doha miaraka amin'ny akanjo lava izy ireo, mba hampisehoana ny faritra ambony amin'ny vatana ny fikolokoloana. Tokony ho takatrao fa kolontsaina samy hafa be izy ireo Ilay iray mety anananao rehefa tianao ny mampihanjahanja ny fahamendrehana, saingy tokony hajaina toa ny itiavanao hajaina ao an-trano izany, tsy tokony ho foana ny fanajana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Filipina » Mikatsaka fahalalahana? Nudism any Azia